Friday 21st of January 2022 / 02:24:44 PM
दोस्रो विश्वयुद्धमा हराएको पर्स ७७ वर्षपछि भेटियो, यस्तो छ कहानी
झन्डै शताब्दीपहिले हराएको पर्स फेरि भेटिएला भन्ने आशा कसले सायदै राखेको हुन सक्छ । तर, आशा नराखे पनि यस्तो भएको छ ।
अमेरिकाको जर्जियामा बस्ने रोय रोट्स नामका वृद्धको जीवनमा ७७ वर्षपछि खुसी छाएको छ । ७७ वर्षअघि युद्धक्रममा हराएको पर्स भेट
बिहे गर्न सुहाउँदो जोडी नपाएपछि युवतीहरुको यस्ताे छटपटी
अनलाइन दर्पण 2018-08-21
उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै हारगुहार गर्न थालेका छन्। यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो गाँउ एकजना पनि अविवाहित पुरुष छैनन्। तर ६ सय जना अविवाहित महिला छन
किन दाहिनेभन्दा देब्रे हातको प्रयोग कम हुन्छ ?
हातले केही समाउन सिक्ने बेला बच्चाहरूले दुवै हातको प्रयोग गर्छन् । तर बल बढ्दै जाँदा उनीहरूले दुइटै हातको प्रयोग गर्न थाल्छन् । कतिपय बच्चाले दाहिने हातको प्रयोग बढी गर्छन् भने कतिपयले देब्रे हातको ।
हामी बच्चालाई दाहिने हातको प्रयोग गर्
यी हुन् विश्वकै तेज दिमाग भएका १० व्यक्तिहरु
अनलाइन दर्पण 2018-08-19
मस्तिष्क शरिरको मुख्य तथा अत्यन्तै नबुझिने भाग हो । हाम्रो पहिचान बनाउन हाम्रो मस्तिष्कको ठुलो भुमिका रहेको हुन्छ । कतिले त्यस्ता मानिसलाई मानसिक रोगी पनि भन्ने गर्छन् । तर मस्तिष्कले बनाएको पहिचानको लोभ गर्ने पनि कम रहेका छैनन् ।
यौन सम्बन्ध स्थापित नगरिकनै किन आमा बनिरहेछन् महिला ?
अनलाइन दर्पण 2018-08-16
अन्य व्यक्तिको शुक्रकिट खरिद गरेर आमा बन्ने महिलाको संख्यामा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता महिला विवाह नगरी, यौन सम्बन्ध स्थापित नगरीकनै आइभिएफको सहारा लिएर आमा बनिरहेका छन् ।
पोली केर पनि ती महिलामध्ये एक हुन् जो शुक्रकिट खरिद गरेर आम
खुर्सानी खाने अनौठो प्रतियोगिता
अनलाइन दर्पण 2018-07-12
झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या भएको देश चीनमा अनेक थरी प्रतियोगिता हुन स्वभाविकै हो ।
चीनको हुनान प्रान्तमा यस्तै एक रोचक प्रतियोगिता हुन्छ, जसमा भाग लिन जोकोहीले हिम्मत जुटाउन गाह्रो पर्दछ ।
हुनान प्रान्तमा हरेक वर्ष खुर्सानी खाने प्
नयाँ बर्षको दिन मात्र फुल्ने अनौठो हारमको फूल:यस्ताे छ वास्तविकता
अनलाइन दर्पण 2018-04-14
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिराहाको पडरिया चोकदेखि दक्षिणमा रहेको ऐतिहासिक तथा प्राचीन फूलबारी छ जहाँ नयाँ वर्ष वैशाख १ गते मात्र फुल्ने फूल देख्न पाइन्छ ।
‘सल्हेस’ फूलबारी ‘हारमको’ रुखमा एकाबिहानै सुनाखर
अनलाइन दर्पण 2018-04-12
काठमाडौं । मेक्सीकोका एकल महिलाले पुरुषसँग नभई रुखसँग विवाह गरेका छन् ।
उनीहरुले पतिका रुपमा रहेका रुख उनीहरुसँग बोल्न नसके पनि आफ्नो पति भएको स्वीकारेका छन् ।
रुख आफ्ना पत्नीभन्दा निकै अग्ला छन् । रुखको त थाहा भएन तर रुखका पत्
नेपाली युवाको मेमोरी पावरले हल्लायो संसार ! दिमागभित्रै बनाए२५ हजार फोल्डर
अनलाइन दर्पण 2018-04-05
यही प्रतिभाका कारण उनले गि
भारतको गुजराँतस्थित अहमदावादमा यस्तो रेष्टुरेन्ट छ जहाँ तपाइँ आफूले चाहेको खाना अर्डर गर्न र खान सक्नुहुन्छ, तर त्यसको पैसा तिर्नुपर्दैन । रकम अरु कसैले चुक्ता गरिसकेको छ ।
अतिथि देवो भवः को भावनामा चलिरहेको छ, त्यो रेष्टुरेन्ट । गुजराती
१ सय १ वर्षीया वृद्धाले जन्माईन नौ पाउण्डको स्वस्थ्य बच्चा
एक महिलाले कति वर्षसम्म बच्चा जन्माउन सक्ला रु हामी अनुमान गर्न सक्छौं बढीमा ५० - ५५ वर्षसम्म । तर तपाईलाई सय वर्ष काटेकी वृद्धाले बच्चा जन्माइन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्ला ।
अनौठो नमान्नुहोस् । इटालीमा एक १ सय १ वर्षकी वृद्धाले
अनलाइन दर्पण 2018-03-12
आजकालको जमानामा पैसाको ताकत हरेक सम्बन्धभन्दा ठूलो छ । पैसाले सबै कुरा किन्न सकिन्नँ भन्ने उक्ति आजकाल भन्नका लागि मात्र भनिन्छ । तर वास्तविकता यहि छ कि जोसँग पैसा छ त्यसैको खुट्टामा संसार छ । हामीमध्ये धेरैले आफूसँग एउटा घर होस् र धेरै पैसा होस्
कुखुराको भाले बासेको विज्ञापन छापेपछि सरकार संटकमा
अनलाइन दर्पण 2018-02-21
एक विज्ञापनको विषयलाई लिएर मलेशिया सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। सरकारले लुनर नयाँ वर्षलाई भव्य रुपमा मनाउन एक पेजको विज्ञापन छापेको थियो, जसमा कुखुराको भाले बास्दै गरेको देखाइएको छ।
चिनियाँ राशी चक्रमा १२ वर्षलाई एक चक्र मानिन्छ। र, प
भर्खरै जन्मेको बच्चा यसरी हिडेको देखेर डाक्टर पनि परे दङ्ग, हेर्नुहोस भिडियो एकाएक भयो भाईरल !
भर्खरै जन्मेको बच्चा हिडेको भिडियो केही समय अगाडी ईन्टरनेटमा निकै नै भाईरल बनेको थियो। यस बच्चाको जन्म ब्राजिलमा भएको हो । सामान्यतया १२ महिनापछि मात्र बच्चा आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ ।
तर यस बच्चाले भने , जन्मेको केही सेकेण्डमै आफ्नो खुट
यस्ता छन् सेक्सबिनै सन्तान जन्माउने जीवहरु
अनलाइन दर्पण 2018-02-19
बच्चा जन्माउन भाले र पोथीबीच संसर्ग हुनु आवश्यक छ । यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो । नर र नारीबीचको शारीरिक सम्पर्कबाट मात्र सन्तान उत्पादन हुने गरेको हामीले सुन्दै देख्दै र पढ्दै आएको तथ्य हो । यस्तो अवस्थामा यदि कुनै महिला कुनै टापुमा एक्लै छिन् र
अनलाइनमा किन्दा आइफोन, घरमा डेलिभरी हुदा भयो लुगा धुने साबुन !
अनलाइन दर्पण 2018-02-05
काठमाडौं । आजभोलि अनलाइन शपिङको जमाना छ । किनमेलको लागि बाहिर जाँदा समयको बर्बाद र शारीरिक कष्ट पनि हुने भएकाले नेपालमा पनि अनलाइनमार्फत् शपिङ गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।
घरमै बसीबसी अर्डर गरेको सामान घरमै आइपुग्छ भने किन घुम्न
गौतम बुद्धको मृत्युबारे यस्ताे रहस्य बाहिरियाे, कति वर्षको उमेरमा के कारण भएको थियो मृत्यु ?(भिडियो सहित)
अनलाइन दर्पण 2018-02-03
गौतम बुद्धको मृत्युको रहस्य, कति वर्षको उमेरमा के कारण भएको थियो मृत्यु ?(भिडियो सहित)
Kathmandu, 2nd February, The Buddha is undoubtedly one of the most influential figures in world history, and his teachings have affected everything fr
किन गरियो ट्वाइलेटमै बिहे ?
अनलाइन दर्पण 2018-02-02
ट्वाइलेटमा त दिसा पिसाब पो गरिन्छ । तर भारतमा पनि ट्वाइलेटमै बिहे गरिएको छ । अनौठो लाग्ने यो घटना भारतको छत्तीसगढस्थित बिलासपुरको हो ।
समाचार अनुसार शबा नवाज नामक युवतीले १० महिना अघि नै ग्र्ने भनी तय भएको आफ्नो बिहे नगर्ने घोषणा गरेकी थ
सपना देख्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् भविष्यको संकेत गर्ने ६५ सपना र यसका फल
भनिन्छ सपनाको प्रभाव मानिसको जीवनमा पर्ने गर्छ । निन्द्रामा देखिने सपनाहरूले मानिसको भविष्यको संकेत समेत गर्ने गर्छ । ज्योतिषहरू सपनाहरू र सपना देखेको समयलाई विचार गरेर सपनाका फलहरू फरक फरक हुने बताउँछन् । सपनामा देखिने दृश्यहरूले थुप्रै सांकेतिक
काे हुन जुनियर याम बुद्ध
उदयपुर , ६ माघ। उदयपुरको चाैदण्डीगढी नगरपालिका घरभई हाल अध्यानकाे शिलशिलामा रहेका अनिलले यतिबेला छाेडिगयाे बाेलकाे र्याप गीत सार्वजनिक गरेका छन् । यतिबेला चर्चामा रहेका अनिल खड्का ( यामजुनियर )भनेर समेत चर्चामा रहेका छन् ।